‘म हाँसेको देखेर रिसाउनेलाई लभ यू’ भन्दै आँचलले कसलाई दिइन् जवाफ ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/‘म हाँसेको देखेर रिसाउनेलाई लभ यू’ भन्दै आँचलले कसलाई दिइन् जवाफ ?
काठमाडौँ । डा उदिप श्रेष्ठसँग प्रेम विबाह गरेकी सुन्दरी अभिनेत्री आँचल शर्मा पछिल्ला दिनमा म्यूजिक भिडियोमा निकै ब्यस्त छिन् । कोरोनाका कारण चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिबिधि अगाडी नबढेका बेला आँचललाई म्यूजिक भिडियोमा नै काम गर्न भ्याई नभ्याई छ । आँचलले अभिनय गरेको बोलको गीतको भिडियो अहिले पनि ट्रेण्डिगंको १ नम्बरमा रहेको छ । म्यूजिक भिडियोको कामका अलावा आँचल सामाजिक संजालमा पनि छाउनेगरेकी छिन् ।
चर्चा र विवादमा छाइरहने आँचल केही दिनदेखि टाउकोको तौलको विषयमा दिएको जवाफका कारण ट्रोलको शिकार भएपछि केही समय हराइन् र अहिले फेरी विभिन्न अन्तरवार्तामा देखिन थालेकी छिन् । यसैबिच उनै सुन्दरी आँचलले आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा एक पोस्ट गर्दै ‘म हाँसेको देखेर रिसाउनेलाई नि ‘लभ यू’ भनेर लेखेकी छन् । उनको यो कटाक्ष ट्रोलर्सप्रति नै भएको बुझ्न सकिन्छ ।
तराजुमा टाउको मात्र राखे टाउकोको तौल थाहा हुने बताएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनलाई विद्वान अभिनेत्री भन्दै मजाक उडाएको विषयमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया नदिएकी आँचलले उक्त विषयको चर्चा सेलाएसँगै उत्तर पो दिएकी हुन् की ?
हेटौडामा दुर्घटना : २ जनाको घट्नास्थलमै निधन !
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयका एक चालकमा देखियो कोरोना
कोरोना संक्रमणबाट वीरगञ्जका ७४ वर्षका वृद्धको मृत्यु